Alexandre Lacazette Oo Ka Hadlay Go'anka Heshiiska Cusub Ee Arsenal
HomeWararka CiyaarahaAlexandre Lacazette oo ka hadlay go’anka Heshiiska Cusub ee Arsenal
Alexandre Lacazette oo ka hadlay go’anka Heshiiska Cusub ee Arsenal
October 12, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka Arsenal Alexandre Lacazette ayaa lagu soo waramayaa inuusan dooneynin inuu heshiis cusub u saxiixo Emirates Stadium.
30 jirkaan ayaa galay 12-kii bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa Gunners wuxuuna sii wadaa inuu keydka fadhiyo iyadoo Pierre-Emerick Aubameyang uu u dhaqmayo sida weeraryahanka dooqa koowaad ee Mikel Arteta .
Arteta ayaa hore u xaqiijiyay in Lacazette uu qayb weyn ku yeelan doono u ciyaarista Arsenal xilli ciyaareedkan, laakiin mustaqbalka weeraryahanka ayaa u muuqda inuu ka fog yahay Waqooyiga London maadaama uu ka dhacayo heshiiskiisa.
Sida laga soo xigtay football.london , Lacazette ‘ma doonayo’ inuu kordhiyo joogitaankiisa Arsenal, kaasoo hadda isku dayi doona inuu dib uga tago kooxda suuqa kala iibsiga ee Janaayo.
Inter Milan ayaa dhawaan loo aqoonsaday inay xiiseyneyso Lacazette, laakiin raacitaanka kooxda heysata horyaalka Serie A ee xiddiga reer France ayaa ku xirnaan karta mustaqbalka xiddigii hore ee Arsenal Alexis Sanchez .
Lacazette ayaa 67 gool u dhaliyay Arsenal 174 kulan oo uu u saftay laakiin waxa uu ciyaaray kaliya 49 daqiiqo oo Premier League ah xilli ciyaareedkan.